Xplora X5 Dlala i-smartwatch yabancane | Izindaba zamagajethi
UMiguel Hernandez | 02/04/2021 16:00 | Kubuyekezwe ku- 27/03/2021 18:32 | General, Izibuyekezo
Ubuchwepheshe beselula nobukhaliphile, noma ngabe kungama-Smartphones noma yiluphi uhlobo lwedivayisi exhunyiwe, yinto omncane kunabo bonke emndenini abelokhu ehlobene nayo kusukela yaqala ukusebenza, noma kunjalo, kusenochungechunge lwamadivayisi afana ne nokugqokekayo ezinikezela ngemisebenzi ethokozisayo kulesi sici mhlawumbe esinganikeza ukuvelela okuthe xaxa kuso.
Ake sibheke ukuthi le X5 Play ingasiza kanjani ukuletha inkululeko nokuvikeleka kwabancane endlini, nokuthi angakusebenzisa kanjani ukusebenza kwayo empilweni yakhe yansuku zonke.
Njengoba kwenzeka kwezinye izikhathi eziningi, sinqume ukuhambisana nokuhlaziywa okujulile kwevidiyo esiteshini sethu se-YouTube lapho sizokufundisa khona ukungabikho ebhokisini ukuze ubheke okuqukethwe ebhokisini nokuthi idivayisi isondele kangakanani , kanye nesifundo esincane lapho sizokukhombisa khona ukuthi ungayilungisa kanjani i- Xplora X5 Dlala ukuyilungisa uma uyinika abancane ekhaya. Thatha ithuba ubhalisele isiteshi sethu bese usishiyela noma imiphi imibuzo ebhokisini lokuphawula.
3 Ukuxhumana nokwenziwa kwasendaweni
4 I-Goplay: Yenze ihambe
Njengomkhiqizo owenzelwe abafana namantombazane ukuthi ungubani, sithola ipulasitiki enjoloba njengesici esiyinhloko. Lokhu kuzoba kuhle ngenxa yezizathu ezimbili, esokuqala ukuthi kuzovimbela abancane ukuthi bangazilimazi ngaso, ngendlela efanayo nokuthi kuzokwenza kube umkhiqizo omelana ikakhulukazi. Ngamafuphi, le divayisi inikezwa ngombala omnyama, noma singakhetha itrimu ehambisana nayo phakathi kokuluhlaza okwesibhakabhaka, okupinki nokumnyama, kanye neminye imininingwane emincane ebhande le-silicone eliyifakayo futhi okulula ukuyishintsha.
Ubukhulu: X x 48,5 45 15 mm
Isisindo: I-54 amagremu
Imibala: Mnyama, upinki futhi uluhlaza okwesibhakabhaka
Kukhanya kancane kosana olunesisindo esiphelele sama-gramu angama-54 kuphela, yize ubukhulu bebhokisi nobukhulu balo bubonke bungabonakala bukhulu kakhulu. Siphinde sibe nesitifiketi se-IP68 esizoqinisekisa ukuthi bangakwazi ukusifaka, basishaye nokunye okuningi ngaphandle kokwesaba ukusiphula. Ngokusobala, iXplora newaranti yayo ayinakekeli umonakalo wamanzi, yize lokhu kungafanele kube yinkinga.
Ngaphakathi kwaleli washi lokufuna ukwazi iprosesa icasha I-Qualcomm 8909W okuzinikele kokugqokekayo, kusebenzisa inguqulo yangokwezifiso ye- Android kanye ne kungenzeka ukufinyelela amanethiwekhi we-4G ne-3G ngenxa yesikhala se-SIM khadi esifakiwe kudivayisi. Ngaphakathi ngaphakathi kunesitoreji esingu-4GB, Yize singenayo imininingwane ethile mayelana ne-RAM, sicabanga ngokusebenza kwemisebenzi yayo ezohlala cishe ku-1GB. Mayelana nalokhu asikaze sibe nezikhalazo, njengoba ubonile kwividiyo.
I-Tamaño de la pantalla: 1,4 amayintshi
Isinqumo ukubonisa: Amaphikseli angama-240 x 240
Ikhamela I-2MP ihlanganisiwe
Ebhethri sine-800 mAh isiyonke ezonikeza usuku lokusetshenziswa okujwayelekile uma senza kusebenze ukusebenza okuyisisekelo. Kodwa-ke, ngedivayisi ekwimodi yokuma eceleni izokwazi ukusinika izinsuku ezintathu zokusebenzisa ngokuya ngezivivinyo zethu.
Ukuxhumana nokwenziwa kwasendaweni
Iwashi linohlelo oluhlanganisiwe lwe-GPS olusekelwa ukuxhumeka kwedatha yeselula, ngalokhu futhi usebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Android ne-iOS. Indawo yengane izokhonjiswa ngesikhathi sangempela, futhi sinethuba lokusungula «Izindawo Eziphephile», ezinye izindawo ezenzelwe wena ezizokhipha izaziso efonini lapho umsebenzisi engena noma azishiya.
Lesi sigaba sixhunyaniswe ngqo naleso sokuxhumana, njengoba sishilo, leli washi lizimele ngokuphelele futhi uma silabela lona ikhadi le-sim Noma ngubani onedatha nokuvumelanisa izingcingo uzosivumela ukuthi sithinte omncane kalula futhi ngokuphepha. Singangeza oxhumana nabo abagunyaziwe abangama-50 ongaxhumana nabo ngezingcingo ngesikrini sakho sokuthinta. Ngokusobala singafunda nemiyalezo kanye nama-emoji enziwe waba ngewakho ku-X5 Play.
Uhlelo lokusebenza lubonakale luphumelela kakhulu, ukusebenza kuketshezi impela futhi kuhlanganiswe kahle kumasistimu ahlukile wokusebenza, noma ngabe sithole mhlawumbe ukusebenza okuphezulu ngandlela thile ku-iOS. Akungabazeki ukuthi ngesinye sezizathu ezinkulu zokuthola lo mshini, ngoba uyisikhungo sayo sezinzwa yize iwashi lizimele.
I-Goplay: Yenze ihambe
I-Xplora ifaka ekubukeni kwayo kwakamuva kwesizukulwane ipulatifomu yomsebenzi ebizwa Goplay. Lolu hlelo lwamarekhodi nemisebenzi seluklonyelisiwe eYurophu, lwaluhlelwa ngokukhetha ngenxa yokusebenzisana kwalo ne-Sony PlayStation. Abancane bazokwazi ukufeza izinselelo zabo futhi ngaleyo ndlela bathole imivuzo.
Uhlelo lokusebenza lwe-Xplora lwe-iOS.
Uhlelo lokusebenza lwe-Xplora lwe-Android.
Lokhu kuzobasiza, inqobo nje uma sibasiza kule nqubo futhi bamukela isinyathelo, sokulwa nokuzikhandla.
Okuthakazelisa kakhulu ukuthi iwashi lifaka ikhamera ye-2MP, Lokhu kuzovumela ingane ukuthi ithathe izithombe ezithakazelisayo futhi wena, ngokusebenzisa irimothi, nawe uthwebula izithombe.
Ukulawulwa kwabazali kunesikhundla esiphambili kuyo yonke isoftware efakwe nedivayisi futhi lokhu kubaluleke kakhulu. Leli washi lisebenzela abancane njengendlela yokuqala yokugqoka, ngendlela efanayo abasivumela ngayo ukuthi siqaphe ngokuqinile imisebenzi yabo, ezingeni lokuphepha nalapho silwa nokuhlala phansi kwabantwana, isihlava esibalulekile ezinganeni. Kuyacaca ukuthi kusukela ezinsukwini, le X5 Play ibekwe njengomkhiqizo othakazelisa ngokukhethekile wemishado, kucatshangelwa ububanzi beminyaka yomkhiqizo nezici ezinikezwayo.
Manje sikhuluma ngokubalulekile, iXplora X5 Play kungathengwa ku- iwebhusayithi yakho yomkhiqizo kusuka kuma-euro angu-169,99, intengo elinganisene inikezwe izici ezinikezwayo.
Kuthunyelwe ku: 2 Apreli 2021
Ukulungiswa kokugcina: I-27 March ka-2021
Uhlelo lokusebenza lwe-Xplora luhle kakhulu
Kucatshangwe kahle ngokulawulwa kwabazali
Ngandlela thile ngosayizi
Akulula ngokweqile ukusetha
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Xplora X5 Dlala i-smartwatch yabancane
I-TCL TS6110, indlela eshibhile yokwakha itiyetha lasekhaya ngeDolby Audio